Wararkii ugu dambeeyey shirka Muqdisho iyo qabanqaabada saxiixa heshiiska oo socota – Benaadir News Network
Wararkii ugu dambeeyey shirka Muqdisho iyo qabanqaabada saxiixa heshiiska oo socota
Muqdisho (Caasimadda Online) – Waxaa Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya ka socoto diyaar garowga loogu jiro munaasabad lagu saxiixayo heshiiska doorashada oo ay si wadajir ah u gaareyn Ra’isulwasaaraha xukuumadda xir-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxda Maamul Goboleedyada.
Xafladda ayaa la filayaa in Maalinta Berri oo khamiis ah lagu qabto teendho ku taalo xarunta Afisyooni, waxaana la filayaa inay kasoo qeybgalan saxiixayaasha heshiiska, Madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday, Musharixiinta, Beesha Caalamka iyo Bulshada rayidka ah.
Qodobkii ugu adkaa ee guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa heshiis laga gaaray, waxaana lasoo sheegayaa in Guddoomiye Cabdi Xaashi lagu riixay inuu sameeyo tanaasul isagoo soo magacaabi doono kala bar xubnaha guddiga heer Somaliland ee doorashada, halka uu xubin ku yeelanayo Guddiga heer qaran ee doorashooyinka.
Sidoo kale arrinta Gobolka Gedo ayaa waxaa lagu dhameeyey guud ahaan in la qaato soo jeedintii guddigii farsamada ee ku shiray Magaalada Baydhabo, kaasoo nuxurkiisa ahaa:
1) In xubnaha Maamul Goboleedyada ay wafdi dib u heshiisiin ah u diraan Magaalada Garbahaarey ee Gobolka Gedo.
2) in Axmed Madoobe uu maamul cusub u magacaabo.
3) In Booliska Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay sugaan amniga doorashada.
Ra’isulwasaare Rooble iyo saxiixayaasha kale ee heshiiska ayaa isku afgartay in muddo 3 bil gudahood lagu qabto doorashada iyadoo wixii khilaaf iyo dood kasoo laabto fulinta heshiiskaas ay go’aan ka gaari doonaan 7-da xubnood ee saxiixayaasha ah, iyadoo ay xusid mudan tahay in booska madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lagu badalay Rooble.
Munaasabadda ayaa la filayaa inay khudbado kala duwan ka jeediyaan madaxweynayaasha Maamul Goboleedyada, Musharixiinta mucaaradka, Xubnaha Beesha Caalamka iyo kuwa Bulshada rayidka ah, iyadoo ugu dambeyntii uu shirka soo xiri doono madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya & Madaxda Dowlad-Goboleedyada ayaa Arbacada maanta sii wadaya kulamada iyo wadatashiyada ay la leeyihiin Musharixiinta, qaybaha kala duwan ee Bulshada & shaqsiyaadka ay u arkaan in ay door ku leeyihiin doorashooyinka.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq waxa uu Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay uu u sheegay in heshiis wadajir ah ay wada-gaareen Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, Madaxda Dowlad-Goboleedyada & Gobolka Banaadir si dalka uu u galo Doorashooyinka Baarlamaanka iyo madaxtooyada.
Heshiis ay dhinacyada gaaraan ayaa dhabaha u xaari kara in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho lagu kalsoon yahay, kadib markii uu muddo xileedka Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo dhammaaday 8-dii February.
Previous Xuutiyiinta Yemen oo soo qabtay sarkaalkii ay raadinayeen Soomaalida
Next Abwaan iyo majaajileyste caan ka ahaa Soomaaliya oo geeriyooday
Anthony Downs, RIP – Reason.com
“That bargain is now gone” David Moyes issues update on future of Declan Rice
Nigeria's Sunusi on target for Wanyama's CF Montreal vs Toronto, Senegal's Badji strikes for Colorado Rapids